बिना अप्रेसन कसरी निकालियो पेटभित्र अड्किएको चम्चा? हाल ती किशोरी उपचारपछि डिस्चार्ज भएकी छिन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। यस किसिमको जटिल उपचार जीवनमा पहिलो पटक गरेको डा कुँवर सुनाउँछन्। १० घण्टा पहिले
चुडिएको हात तथा औँला जोड्ने ह्याण्ड सर्जरी के हो? दुर्घटनाका कारण कुनै बेला व्यक्तिको हात चुडिने तथा चोटपटक लाग्ने गर्दछ। सामान्य चोटपटक लाग्दा शल्यक्रियाको आवश्यक पर्दैन। तर दुर्घटनामा परेर हात तथा औँला चुडिए शल्यक्रिया मार्फत नै त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। शनिबार, वैशाख १०, २०७९
के स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गर्न लागिएको हो? के हो यथार्थ? स्वास्थ्य बीमा नेपालको लागि आवश्यक छ। यदी स्वास्थ्य बीमा फेल भयो या खारेज भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्र ५० वर्ष उँभो लाग्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्र ५० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ, सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गर्ने गल्ती गर्दैन। सोमबार, वैशाख ५, २०७९